Barcelona Oo Diyaar U Ah Inay 5 Milyan Ginni Kula Soo Wareegto Edinson Cavani.
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo diyaar u ah inay 5 milyan ginni kula soo wareegto Edinson Cavani.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay 5m dalab ah u direyso Manchester United xidigeeda Edinson Cavani .
Kooxda reer Catalan ayaa go’aansatey in ay weeraryahan cusub keento kooxda inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo laakiin waa la xaddiday dhibaatooyinka dhaqaale ee joogtada ah.
Cavani, oo hadda dhaawac uga maqan kooxda ayaa wax ka yar lix bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa Old Trafford, lamana filayo inuu qalinka ku duugo heshiis kordhin.
Sida laga soo xigtay The Mirror , Barcelona ayaa u aqoonsatay xiddiga heerka caalami ee dalka Uruguay inuu yahay bartilmaameedka ugu horreeya ee suuqa kala iibsiga, waxaana ay diyaar u tahay inay Man United u soo bandhigto 5 milyan ginni adeegiisa bisha Janaayo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Inter Milan ay sidoo kale aad u xiiseyneyso 34-sano jirkaan, kaasoo dhaliyay kaliya hal gool sideed kulan oo uu u saftay 20-jeer horyaalka Ingariiska xilli ciyaareedka 2021-22.
Laacibka reer South America ayaa muujiyay inuu yahay saxiix muhiim u ah Red Devils ah, inkastoo uu shabaqa soo taabtay 18 jeer, waxaana uu gacan ka geystay lix caawin